Toro-hevitra 6 mampivoaka tsara ny lokom-bolo
Ny fomba ikoloana ny volo miloko
Marina fa manova be ny endrika ny fandokoana ny volo saingy mety manimba ny volo ny fanaovana azy raha toa ka tsy arahina fikarakarana.
Maska amin’ny labiera : manalava ny volo manify
Azo ampiasaina tsara amin’ny volo ihany koa ny labiera. Ireo manana ireny karazam-bolo manify no sady maina ireny no tena hahazo tombony amin’ity karazana maska ity. Mampangirana sy manatevina ary manalava azy ireny ny labiera.
Maska vahona sy yaourt, ho an’ny volo frisé
Maro amintsika vehivavy no maniry hanana volo frisé na ihany koa crépus. Mila fikolokoloana matetika ireny karazam-bolo ireny na fohy io na lava raha tiana hivoaka amin’ilay hitiavana azy tsara.
Mitsabo volo simba amin’ny « lait de coco »
Tsy natao hosotroina ihany ny « lait de coco » fa afaka ampiasaina tsara amin’ny volo ihany koa. Ny « lait de coco » dia tsy ilay ranona voanio miraraka rehefa vakiana iny fa ilay ranona voanio fotsifotsy azo avy amin’ny nofony iny rehefa kikisana miampy rano kely. Mikolo ny volo simba izy, manamandina volo ary tsara atao maska ny « lait de coco ».
Ireo akora ikoloana volo rehefa ririnina
Ho an’ireo karazam-bolo somary marefo rehefa tratry ny hatsiaka ka maimaina, matro-doko, tsy mangirana na simba mihitsy, ary indrindra misy angadrano dia azo atao tsara ny mampiasa ny vokatra L'OREAL PROFESSIONEL, toy ireto roa tanisaina ireto.
Manalava volo amin’ny ovy…
Akora tena mandaitra hampalava volo kanefa tena mora vidy sy mora hita eny an-tsena ny ovy. Tena natoraly ihany koa izy ity ka sady mahasalama ny volo no mampaniry azy haingana. Ny fikarakarana ny volo amin’ny ovy dia mety ahitana vokany ao anatin’ny iray volana monja. Araho ary ny fampiasana azy.
Ny volo miloko dia isan’ny volo marefo sy mila fikarakarana indrindra. Sady manimba ny volo mantsy izy io raha tsy voakarakara no miavasoka ilay loko na miova tanteraka. Araho ary ireto toro-hevitra ireto mba hivoaka tsara lokom-bolonao.
Mampiasa akora natokana ho an’ny volo miloko
Ny fitsipika tokony harahina voalohany indrindra raha manana volo miloko dia ny fampiasana ny akora mifanaraka amin’izany. Manomboka any amin’ny « shampooing » izany ka hatrany amin’ny « après-shampooing », ny maska ary ny menaka na ny « sérum ». Tsy ahitana singa antsoina hoe « sulfate » izay tompon’antoka voalohany amin’ny fahasimban’ny loko mantsy izy ireny ka tokony ampiasaina mba hampivoaka sy hampaharitra ny lokom-bolo.
Tsy manatsotra volo
Ireny karazana fitaovana fanatsorana volo (fer à lisser) ireny dia tena manimba ny lokom-bolo. Tokony ho fadiana voalohany indrindra aloha ny fampiasana ireny karazana fitaovana ireny raha mbola mando ny volo. Ferana araka izay azo atao ihany koa ny fampiasana azy ireny. Raha ny tokony ho izy dia eo amin’ny indray mandeha isaky ny 15 andro eo ny fampiasana izany. Ny tena tsara aza moa dia tsy mampiasa ireny karazana fitaovana ireny fa ny fanatsorana volo amin’ny alalan’ny entona no mety ho an’ny volo miloko.
Safidiana izay haingom-bolo ampiasaina
Mba tsy hahatapatapaka ny volo sy hahavakivaky azy dia fadiana ny mampiasa haingom-bolo vita amin’ny vy izay harafesina. Tsy tsara ihany koa ny mampiasa ireny fatoram-bolo plastika na vy mety hanapatapaka ny volo sy hanimba ny loko ireny.
Arovana amin’ny hafanana
Isan’ny manimba ny lokom-bolo ihany koa ny hafanana be loatra. Mba hiarovana amin’izany dia tsara raha “sèche-cheveux” misy hafanana aza amboarina no ampiasaina. Ireny misy rivotra mangatsiaka ireny koa no tena tsara hananan’ireo manana volo miloko. Rehefa manao “brushing” moa dia tokony hampiasa akora miaro ny volo hatrany.
Fadiana ny hain’andro
Ny volo miloko no mora hiaran’ny voka-dratsin’ny hain’andro sy ny sira indrindra. Miavasoka na miova tanteraka mihitsy mantsy ny lokom-bolo raha tratran’ireo singa ireo. Ny mety araka izany dia mampiasa akora miaro ny volo amin’ny masoandro ary manasa loha hatrany isaky ny avy milomano.